सलमान खानकाे सबैकुरा सहेकी छुः ऐश्वर्य राय - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
सलमान खानकाे सबैकुरा सहेकी छुः ऐश्वर्य राय
बलिउडका सबैभन्दा लोभलाग्दो जोडी मानिन्थ्यो, ऐश्वर्य राय र सलमान खानलाई । रुपरंगको कोणले होस् वा ‘नेम र फेम’को, दुबै पर्फेक्ट थिए । उनीहरुको प्रेम र रोमान्सले बलिउडलाई रोमान्टिक बनाइरह्यो ।
कुनैबेला एकक्षण छुट्न नचाहने यो जोडी अहिले आमने-सामने हुन पनि असहज मान्छन् । बलिउड इभेन्टमा संयोगवस् उनीहरुको एकै थलोमा उभिन पुग्छन्, तर वातचित हुँदैन । हेराहेर पनि ।
सलमानको प्रेम-जीवनमा पनि कहाँ उस्तै रहन्छ र ? यसबीचमा धेरै उतारचढाव आयो । ऐश्वर्यसँग फाटो आएपछि उनले क्याटरिना कैफदेखि युलिया वन्तुरसम्मलाई आफ्नो प्रेमिल अंगालोमा बाँधिसके । अहिले उनी युलियासँगै रोमान्स गरिहेका छन् ।
फरक के छ भने, सलमान अझै वैंशालु प्रेममा रमाइरहेका छन् । ऐश्वर्य राय दाम्पत्य सुख-भोग गरिरहेका छन् ।
भनौं, उनीहरु आ-आफ्नै दुनियामा मग्न छन् । यद्यपी विगतका प्रेम प्रसंग कोट्याएर उनीहरुलाई चर्चा एवं विवादमा ल्याउने काम भने भइरहन्छ । यसपाली चाहि उनीहरुको चर्चाको कारण बनेको छ, संजय लीला भन्सालीको फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम-२’ ।
सन् १९९९ मा प्रदर्शनमा आएको यो फिल्ममा सलमान खान र ऐश्वर्य रायले अभिनय गरेका थिए । अहिले सोही फिल्मको दोस्रो भाग बन्ने तयारी छ र त्यसमा पुन सलमान-ऐश्वर्य दोहोरिने हल्ला चलेको छ ।
उक्त अन्र्तवार्तामा के भनेकी थिइन् त ऐश्वर्यले ?
रात दुई बजे आएका थिए सलमान
ऐशले सलमानको कुनै फोनको जवाफ दिइरहेकी थिइनन् । यस्तोमा सलमान राती २ बजे आए र ऐशको अपार्टमेन्टको ढोका ढकढक्याउन थाले । ऐश्वर्यले ढोका खोलिनन् । तब सलमानले त्यहाँबाट हाम फाल्ने धम्की दिए ।
ऐशले सलमानलाई कुनै जवाफ दिएनन् तब सलमानले ढोका हिर्काइरहे । उनले ढोका त्यसबेलासम्म हिर्काइरहे, तबसम्म उनको हातबाट रगत निस्किएन । अन्ततः ऐश बाध्य भइन् र ढोका खोलिन् । भोलिपल्ट ऐश्वर्यले सलमानको विरुद्ध उजुरी दिइन् ।
२१ बर्षमा परिवारबाट टाढा
ऐशले भनेकी छिन् कि उनले सलमानका लागि सबैकुरा गरिन् । उनी केवल २१ बर्षकी थिइन् तैपनि सलमानका खातिर उनले परिवार छाडेर एक्लै अपार्टमेन्ट लिएर बसिन् ।
सोमीको कारण झगडा
ऐशका अनुसार सलमान र उनको झगडा सोमी अलीलाई लिएर भएको थियो । ऐशलाई कुनै जानकारी नदिइ सलमानले सोमीलाई सहयोग गर्न अमेरिका गए । उनका पिता बिरामी थिए र उनलाई सहयोगको जरुरी थियो ।
धोका दिएको स्विकारोक्ती
ऐशले भनेकी छिन् कि, सलमानले नै आफुले धोका दिएको स्विकार गरे । उनी अरु कसैसँग रोमान्स गरिरहेका थिए । यसपछि ऐशले उनलाई छाड्ने निर्णय गरिन् ।
आफुले सतप्रतिशत दिएको
ऐशले उनीहरुको रिलेशनसिपमा आफ्नोतर्फबाट सत्प्रतिशत दिएको बताएकी छिन् । ऐश सलमानको परिवारसँग नजिकिइन् । तर, बदलामा उनलाई धोकेबाज भनियो र उनको हरेक को-स्टारसँग उनको नाम जोडियो ।
सबैकुरा सहेकी थिए
ऐशले दावी गरेकी छिन्, उनले आफ्नो सम्बन्ध बचाउनका लागि सबैकुरा सहेकी थिइन् । सलमानको रिस, चिच्याहट, मारपिट, आरोप । जबकी उनी स्वयम् ऐशलाई धोका दिइरहेका थिए ।
मैले आफ्नो इज्वत बचाएँ
ऐशले सलमानको फोन रिसिभ गर्न छाडेकी थिइन् । यद्यपी सलमान मान्दैनथे । उनी ऐशको सेटमा आउथे र तमासा देखाउथे । साथै ऐशलाई अरुसँग अफेयर रहेको आरोप लगाउथे । ऐशले भनेकी छिन्, ‘मैले उनीबाट आफ्नो इज्वत बचाउन उपयुक्त ठानें ।’
ऐशले बताएका थिए कि सलमानको कारण उनको करियर दाउमा थियो । उनलाई फिल्मबाट निकालिन्थ्यो र उनलाई अनप्रोफेशनल भनिन्थ्यो । निर्माताहरुले उनलाई फिल्मबाट हटाउन थालिसकेका थिए ।
यस अन्र्तवार्तामा ऐशले भनेकी छिन् कि सलमानलाई उनले सम्झाउनका लागि हर प्रयास गरेकी थिइन् । तर, सलमानको बानी उस्तै थियो ।